Articles tagged 'potraz'
Potraz sets up temporary licensing office in Kariba 14 December 2018 HARARE - Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) will be opening a licensing office at Kariba Post Office this month. In a statement, Potraz urged those with boats and walkie talkie radios to renew their licences between December 10 and 18. “Potraz advises re...
Zim reaps benefits of infrastructure sharing 13 December 2018 HARARE - Government says it has begun to reap fruits of infrastructure sharing among the country's three major mobile network operators, with studies indicating increased costs reduction. This comes at a time government, through the Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabw...
Forex shortages stall roll out of computer programmes 15 November 2018 HARARE - Foreign currency shortages are hobbling Postal and Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) from rolling out programmes for physically challenged computer users. Potraz, in collaboration with ICT and Cyber Security ministry, has been working to ensure that the uptak...
Potraz to introduce innovation hubs, hackathons 17 October 2018 HARARE - The Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) says it plans to introduce innovation hubs and hackathons as part of its information and communication technology (ICT) Innovation Drive. The ICT Innovation Drive had up to this point operated only as a revolv...
Telecoms regulator flexes muscles 24 September 2018 HARARE - Zimbabwe's telecommunications regulator says it will order companies in the sector to connect marginalised people in Maranda, Mwenezi, who have no access to communication channels. The small business centre on the northern edge of Mwenezi is only serviced by Zimbabwe's largest mobile ...
Potraz intensifies consumer awareness campaigns 10 September 2018 HARARE - The Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe has increased visibility in most rural areas, after canvassing the country's 10 provinces, teaching mobile network providers' consumers on their rights. The telecommunications regulatory authority invaded the Midlands ...
Potraz records $13,5m profit 24 August 2018 HARARE - Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) yesterday said it recorded a $13,5 million surplus position in the year to December 2017, after collecting $31,9 million in revenue. Ozias Bvute, the industry regulator's chairperson, said the organisation weather...
Govt intensifies e-learning programme 16 April 2018 HARARE - The Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) this week took its broad mission to ensure Tsholotsho among other marginalised districts in the country are fully connected to e-learning and e-government. Tsholotsho, Matabeleland North province is one of the...
Muzarabani goes online 14 March 2018 HARARE - One of Zimbabwe's most marginalised communities in the country, Muzarabani, is now part of the global community after it was connected to the Internet last Friday. The dry and remote area of Muzarabani, which is relatively flat and situated along the Mozambique-Zimbabwe border in Mash...
Potraz warns telcom firms 12 March 2018 HARARE - The Postal and Regulatory Authority of Zimbabwe (Potraz) has warned telecommunication companies to put the interests of subscribers first or risk being fined for providing poor services to subscribers. Potraz head of consumer affairs and publicity George Manyaya told thousands of peop...